Izay vehivavy tena tianao amin'ny fifandraisana - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Ranomasimbe ny fanamarihana: ny Fiainana ao Boomer lane vao haingana izay dia namoaka ny fanehoan-kevitra tao amin'ny"Universal adala mafana matrix: Lehilahy Mpanatanteraka ho an'ny vehivavy."Nanomboka tamin'izay izy no nahatsikaritra fa io toerana io dia mbola ny malaza indrindra, milaza ny tombontsoa lehibe ao amin'ny olona ny fahatakarana ny vehivavy na lehibe finoana fa mafana ny vehivavy no adala. Izany fandraisana anjara dia afaka manampy mba hanala ny saron-tava avy izany.
Eto Aho noho ny lahatsoratra: ny fandinihana vao haingana navoaka tao amin'ny Toetra sy ny Social Psychology Bulletin nahita fa na dia ny olona no tia a tsara tarehy ny vehivavy taorian'ny fivoriana ny vehivavy dia tsy mahatsapa toy izany koa ny momba ny lehilahy.
Mpikaroka avy ao amin'ny Oniversite ny Rochester, ny Oniversite Illinois ao Urbana-Champaign, ary ny Herzliya Interdisciplinary center (IDC) ao amin'ny Isiraely nanao fanadihadiana ny mety ho rafitra, ny manazava hoe nahoana ny lehilahy sy ny vehivavy hitovy eo amin'ny firaisana ara-nofo valin-mandray ny firaisana ara-nofo miaraka amin'ny olon-tsy fantatra. Aleo mijanona mandritra ny fotoana fohy ary mampahatsiahy ny tenantsika isika fa rehefa mandeha ny fotoana, maro ny vehivavy dia voasariky ny"ratsy zazalahy."Ratsy ity lehilahy maneho ny biker amin'ny sekoly ambony dropout izay manana bebe kokoa ny tombokavatsa ny atidoha sela. Ny filma tahaka ny hoe"Maloto ny dihy,ny sabotsy alina ny Tazo,"sy"bibidia"hankalaza ny dikan ny ratsy ry zalahy. Ny fakantahaka dia mitovy: Zaza Ratsy (raha ny marina kokoa sahiran-tsaina, sahiran-tsaina mafy noho ny ratsy) dia mafana, dia tena mafana, dia tena mafana, ary be ny mpandihy. Tovovavy tsara tarehy mianjera-pitia taminy, ary ny farany dia mahita fa ny fahadisoana dia lehibe loatra ny tahony. Dia miverina avy amin'ny toerana nahaterahany ary manambady ny Jiosy mpitsabo nify. Ankehitriny dia mandeha indray ny fianarana: mpianatra dia zaraina mitovy eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy, ary ny mpandray anjara dia tsapaka miaraka tsiroaroa amin'ny olona ny mifanohitra amin'izany firaisana ara-nofo fa tsy maintsy mitondra ny datin ny teo aloha.
Ny fianarana nandinika ny mpandray anjara 'tsy mitsaha-mitombo ny firaisana ara-nofo ny tombontsoa sy ny fihetseham-pony momba ny mety maharitra Mampiaraka ny vaovao"mpiara-miasa", ary koa ny fomba mifandray amin 'ny fomba fijery ny maha-izy azy toetra fa ny fianarana ny antso"response time".
Hitarika mpikaroka:"faniriana ara-Nofo, dia miroborobo tokoa eo amin'ny fampitomboana ny firaisana ara-nofo, sy ny tompon'andraikitra dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra mba hametraka izany phantom fahatsapana rehefa nandeha ny fotoana."Fa ny zavatra hitan'ny mpikaroka fa (ho azy ireo) tsara tarehy manambitana mahagaga. Ny olona mahita vehivavy tsara tarehy kokoa sy tsara tarehy tsara tarehy. Rehefa naka fanahy ny vehivavy saro-pady ny olona, dia nahatsapa fa tsy dia nahasarika olona. Aoka handray izany amin'ny manan-danja kokoa ny sehatra ho an'ny rehetra, ireo ny mpamaky izay mihinana ny bacon cheeseburger raha mamaky: Rehefa nihaona voalohany, lehilahy tia vehivavy tsara tarehy. Ny vehivavy, ny eritreritra ny Nisa, ny lehilahy no blah-blah. Ireo mpandray anjara ao amin'ny faharoa fianarana nanao ny namaly na tsy mavitrika olona ny mifanohitra amin'izany firaisana ara-nofo, ary avy eo dia ampitaina aminy online, milaza amin'ny antsipirihany ny amin'izao fotoana izao ny olana eo amin'ny fiainany. Ny tanjona eto dia mba hanala mety mampisaraka ny singa iray mavitrika ara-tsosialy fifandraisana (tsiky, fifanintonana ara-batana) mba hahitana raha toa izy ireo dia afaka hitoka-monina tena tompon'andraikitra na ny fiaraha-miory-tsehatra avy eo ny mitaingina. Ankoatra izany, ao amin'ny fianarana amin'ny reactive sy mitandrina ny fisainana, ny olona no manintona kokoa ny vehivavy rehefa mety ho mpiara-miombon'antoka, raha ny vehivavy mahafantatra ny olona mitovy toetra amin'ny maha olona zavatra maloto toy izay mahazo ny lalana sy ny fanindron'ny azy ireo indray.
Izy dia manana ny foto-pisainana momba ny antony
Ny fahatelo sady farany ny fianarana aseho ao amin'ny taratasy, ny ezaka natao mba hizaha toetra amin'ny fampiharana na ny rafitra izay"reactivity"dia atosiky ny miditra ao amin'ny fifandraisana dia tena ny firaisana ara-nofo arousal. Ity farany dia miverimberina ny faharoa dia ny fandalinana, fa nanampy ny fepetra manokana ny firaisana ara-nofo mahasarika. Izy ireo dia nahita fa ny olona rehefa fantany ny vehivavy ho toy reactive, izany dia mitarika ny fitomboan'ny ny firaisana ara-nofo arousal amin'ny olona. Izany kosa, dia nitarika ho amin'ny faniriana bebe kokoa ho an'ny fifandraisana ara-nofo. Toy izany koa ny vokany: ireo lehilahy nino fa reactivity ara-nofo tsara. Ny mpikaroka mbola tsy natoky ny tenany noho ny vehivavy dia tsy dia ara-nofo mavitrika amin'ny vahiny noho ny lehilahy. LBL ridicules teoria. LBL afaka mamonjy ireo mpikaroka be dia be ny fotoana sy ny ezaka. ny vehivavy dia nahasarika ny fanahy saro-takarina, tsy afaka nidirana intsony ny olona. Izany no tsotra. Ny isa farany dia tsy tsara foana ny iray, lehilahy mahafinaritra tahaka anao. Dia tia ny olona rehetra, marina? Ny takela-barahina peratra foana ny olona tahaka anao, izay tamin 'na tamin' izay. Izy mitaingina ny môtô na mikoriana manodidina amin'ny fampakaram-bady peratra, na tsy haka fanafody.
Tena mampatahotra sy mampidi-doza, ary inona ny reniko dia nampitandrina antsika mikasika ny.
Ary isika dia mandeha ho amin'ny tsara.
Mazava ho azy, ny tanjona dia ho raiki-pitia amintsika, ary hampitsahatra ny môtô, hitafy ny engagement ring, na manomboka ny fandraisana ny fanafody.
Amin'ny teny hafa, dia hanova azy mba ho lasa bebe kokoa ireo izay tsy mahasarika mihitsy. Ny ankamaroan'ny vehivavy vao mahatsapa fa ratsy ny ankizilahy tsy mety manana hevitra tsara rehefa avy rehetra, ary hiafara amin'ny olona tsara. Ny sisa antsika hanao asa avy nanenjika ny ratsy zazalahy, matetika miaraka mialoha ny vokatra. Vitsy ny azy ireo hiafara amin'ny ratsy zazalahy izay tena manana fo volamena, ary toa ny fifandraisana amin'ny asa. Any Hollywood sy eo amin'ny fiainana tena izy, ireo ratsy ankizilahy dia tsara, satria amin'ny farany ity dia iray amin'ny taona izay aho vao reraka loatra ny hanao ny zavatra nataon'izy ireo izy.
Seza dia azo atao ho an'ny olona rehetra.
Arahabaina eo amin'ny fampakaram-bady, George Clooney. Ny valin ny fanontaniana hoe inona ny vehivavy tena tianao dia ny hoe amin'ny farany isika rehetra dia te ho tiana sy omen-danja. Afaka ihany no mahazo any amin'ny fandehanana amin'ny lalana tsy mitovy na tsia. Raha isika no tsy tsara vintana isika, dia afaka mahazo be dia be ny hetsika ao amin'ny dingana.
Raha manao izany isika, dia afaka ny ho tonga ny onja mpandihy.
jereo ny amin'ny chat roulette Fiarahana tsy misy fisoratana anarana Te-hihaona amin'ny zazavavy watch video internet amin'ny chat roulette fisoratana anarana ankizivavy ombiasy tao Chatroulette ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana raha tsy misy fepetra an-tserasera ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana amin'ny zazavavy ny lahatsary amin'ny chat online check